तपाईंले,भुलेर पनि यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुहोस्, नत्र…. – News Nepali Dainik
तपाईंले,भुलेर पनि यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुहोस्, नत्र….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: ९:०६:०७
काठमाडौँ ।दान दिनु आफैंमा उत्तम कार्य हो । शास्त्रले पनि दान दिनु पुण्यको काम हो भनेको छ । दान दिँदा के दिने के, नदिने यसबारे भने जान्नैपर्ने हुन्छ । किनभने केहि यस्ता पनि चिज छन् जुन दान दिन अशुभ मानिन्छ । आज हामी दानमा दिन नहुने चिजबारे तपाइहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
१. स्वंयबरको औंठी :
स्वंयबरको औंठी भुलेर पनि अरुलाई नदिनुहोला अर्थात् दान नदिनुहोला । स्वंयबरको औंठी माया र प्रेमको निसानी वा माया र प्रेमको उपहार हो, यसले जीवनमा ठुलो महत्व राख्दछ, स्वंयबरको औंठी कोहि कसैलाई दान, उपहार र सापटीमा नदिनुहोला ।
२. घडी :
घडीले तपाईको समय बताउँछ । राम्रो या खराब समय घडी र तपाईको प रिस्थितिले जनाउँछ । घडी जुन व्यक्तिले सधैँ प्रयोग गर्ने गर्छ त्यहि व्यक्तिप्रति निर्भर रहेको हुन्छ । अरु कसैको घडी तपाईको नाडीमा बाध्नु भनेको तपाईको जीवनमा असर गर्नु हो।
जसको कारण तपाईले आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी साथीभाई या कोहि आफन्तले तपाईको हातमा लगाइराखेको घडी एकछिन वा एकदुई दिन मागेमा दिने काम नगर्नुहोला ।
कहिलै पनि पैसा राख्ने भाँडोलाई खुल्ला नछोड्नुहोस्, नत्र निम्तिन्छ…
अर्को कुरा अरुको हातको घडी पनि तपाईले नबाध्नु होला । यस्तै उपहार या दानमा पनि घडी दिनु राम्रो होइन । धेरैको बानी हुन्छ उपहारमा घडी दिने । अझ विदेशबाट आउनेले त प्रायजसो घडी नै उपहारमा दिने गर्छन् । तर त्यसो गर्नु नराम्रो हुने चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. पैसा :
धन लक्ष्मीको कृपा हो । तर धनले कोही कसैलाई आफ्नो बनाउँन सकिदैन । उदाहरणका लागि तपाईले कसैलाई तलब दिएर राख्नुभएको छ र केहि दिन ढिला भयो भने तपाईमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भैहाल्छ । अनि धनले कसरी आफ्नो बनाउँन सकिन्छ ?शास्त्रका अनुसार धन सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो ।
धनकै कारण कति अपराधिक घटना घट्ने गरेको समाचार बेलाबेला आइरहन्छ । अझ आफन्तसँग त झन् पैसाको लेनदेन गर्नै हुँदैन । धनकै कारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ ।
हामीले कसैलाई दान गर्दा पैसाको सट्टा अरुनै चिज दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सापटीमा पनि सकभर पैसा नदिएकै राम्रो हुने वा नलिएकै राम्रो । किनभने पैसा सापटी लिएकै दिन त्यो मान्छेको नजरमा तपाई गिर्नुहुन्छ या लिने मान्छे गिर्छ ।
Last Updated on: March 4th, 2021 at 9:06 am
९९० पटक हेरिएको